I-Graava: Ikhamera yevidiyo ehlakaniphile ehlela ngokuzenzakalela | Martech Zone
Ngo-2012 uBruno Gregory washayiswa yimoto ngesikhathi ehamba ngebhayisikili lakhe. Umshayeli ushiye obonwe kodwa uBruno ukwazile ukuthola ukuthi umshayeli ulahlwe yicala ngoba ubenekhamera eqopha lo mcimbi. Ngonyaka olandelayo, waqhamuka nombono wokusebenzisa izinzwa nokufunda ngomshini ukwenza ikhamera ezitholela kuphela imicimbi ebaluleke kunokuqopha amahora evidiyo engadingekile, bese kudingeka ukuthi adlule kuyo ukuhlela ndawonye izikhathi ezibalulekile.
Umphumela waba Graava, ikhamera yokucaca okuphezulu (1080p 30fps) efaka i-GPS, i-Wi-Fi, i-Bluetooth, i-accelerometer, inzwa ye-gyro, imakrofoni ezi-2 ezisezingeni eliphakeme, inzwa yokukhanya, inzwa yesithombe, isipikha ngisho ne-monitor rate ozikhethela. Ikhamera ayizwani namanzi futhi ine-micro SD slot ne-micro HDMI slot.
Nakhu ukubona ukuthi uGrava unquma kanjani ukuthi ividiyo izolondolozwa
Nayi imizuzwana engu-30 ehamba phambili, hlanganisa nomculo ngohlelo lokusebenza.
Uhlelo lokusebenza lwe-Graava likuvumela ukuthi wabelane ngamavidiyo akho, uwalondoloze, ulawule ikhamera ukude, futhi ulawule izilungiselelo zekhamera.
Tags: ikhamera +i-graavaAmavidiyo WokumakethaIsiqophi Isiqophi